ဇွဲလုံ့လဝိရိယရှိရှိ ယေရှုဘုရား၏ အမှုဆောင်ရွက်ခြင်းသည်- ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မဟာပုံသက်သေဖြစ်သည် | The Zeal of Jesus – Our Great Example! | Real Conversion
ဇွဲလုံ့လဝိရိယရှိရှိ ယေရှုဘုရား၏ အမှုဆောင်ရွက်ခြင်းသည်- ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မဟာပုံသက်သေဖြစ်သည်
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ ၃၀ရက်၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊
တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
ဇန်နဝါရီလ(၂၃)ရက်၊ ၂၀၁၁ ၊ သခင်ဘုရားနေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့)
“ကိုယ်တော်၏အိမ်၌ စွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည် ကျွန်ုပ်ကို စားပါ၏။” (ရှင်ယောဟန် ၂း၁၇)
ယေရှုဘုရားသည် ယေရုဆလင်မြို့သို့ ရောက်ရှိသောအခါ ထိုမြို့သည် လူပြည့်ကျပ် ကြိတ်တိုးလျှက်ရှိသည်။ ထိုသူတို့သည် ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်း ပသခါပွဲကိုခံရန် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်သို့ရောက်သောအခါ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားသည့် ကုန်သည် များနှင့် ပိုက်ဆံလဲလှယ်သူပွဲစားများ ထိုင်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသူတို့သည် ယစ်ပူဇော်ရန် သိုး၊ နွား၊ ချိုးငှက်တို့ကို ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားခဲ့ကြသည်။ ပိုက်ဆံ အကျိုး အမြတ်ရရှိအောင် ဗိမာန်တော်တွင်း၌ ပွဲစားများ၊ ပိုက်ဆံလဲလှယ်ကြ၏။ ထိုအခါ ယေရှုသည် ကြိုးကိုကျစ်၍ ကြာပွတ်လုပ်လေင်္ပြီး ထိုသူတို့အား ဗိမာန်တော်မှ နှင်ထုတ်လေ၏။္ထ
“ချိုးငှက်ရောင်းသောသူတို့အားလည်း ၊ ဤဥစ္စာကို ယူသွားကြ။ ငါ့အဘ၏အိမ်တော်ကို ပွဲတဲမလုပ်ကြနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ရှင်ယောဟန် ၂း၁၆)။
ထိုအခါ တပည့်တော်တို့သည် ဆာလံ ၆၉း၉ ၌ ပရောဖက်ဟောကြားချက်ဖြစ်သော “ကိုယ်တော်၏အိမ်တော်၌ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းစိတ်သည် အကျွန်ုပ်ကိုစားပါ၏” (ယောဟန် ၂း၁၇) ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကို မှတ်မိခဲ့ကြ၏။ “ကိုယ်တော်၏အိမ်တော်၌ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းစိတ်သည် အကျွန်ုပ်အား မီးကဲ့သို့စားပါ၏”ဟု နက်ရှိုင်းစွာ ဘာသာပြန်လိုပါ၏။ ဂရိဘာသာစကား အားဖြင့် ဒဒဇနalဒဒ ၏အဓိပ္ပါယ်ကို ဒင်္ဒနလသမဒဒ ပြင်းထန်သော ခံစားချက်ဟု ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။ ၎င်းပြန်ဆိုခြင်း၏ အရင်းအမြစ်သည် ပူလောင်စေရန်၊ အရေးပါ၍ ရိုးစင်းသော၊ ပြင်းထန်သော ခံစားချက်၊ ယုံကြည်ချက် စသဖြင့် အခြေခံမှလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ခရစ်တော်ဘုရားက “ငါတို့အတွက် ဒုက္ခခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ ခြေတော်ရာကို လိုက်လျှောက်စေခြင်းငှါ ပုံသက်သေကို ထားတော်မူပြီ” (၂ပေ ၂း၂၁) ၌ ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။ ယေရှုဘုရားသည် ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်(ဗိမာန်တော်)အဖို့ ဇွဲလုံ့လဝိရိယ အပြည့် ရှိ၏။ ပြင်းထန်သော စိတ်ဓါတ်ရှိ၏။ လောင်သောမီးကဲ့သို့ ပူလောင်ပြင်းထန်သော သူဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရား၏ အတုယူဖွယ်နမူနာအတိုင်း လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အသက်ရှင် သောဘုရားသခင်၏အသင်းတော် (ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်) အဖို့အလို့ငှါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇွဲလုံ့လ ဝိရိယရှိလျှက်၊ ပြင်းထန်သောစိတ်အား၊ လောင်သောမီးကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော စိတ်ဓါတ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ (၁တိ ၃း၁၅)။ “အသက်ရှင်သောအသင်းတော်” အဖို့ တိတု ၂း၁၄ ၌ ဖေါ်ပြသကဲ့သို့ “ကောင်းသောအကျင့်ဖက်၌ စိတ်အားကြီး၍ ကြိုးစားဆောင် ရွက်သင့်ပါသည်။”
၁။ ပထမ၊ သတင်းကောင်းဖို့အလို့ငှါ ဇွဲလုံ့လဝိရိယရှိလျှက် ဟောပြောသင့်သည်။
ယေရှုဘုရား၊ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်၌ နူးညံသိမ်မွေ့စွာဖြင့် သတင်းကောင်းဟောကြားခြင်း နည်းလမ်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ပုံ အဘယ်နည်းဖြင့် ဟောပြောရမည်ကို စိတ်ကူးရုပ်ပုံ ဖေါ်နိုင်ကြပြီဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း တူညီသောနားလည်မှုက ၎င်းအတွေးအမြင်သည် မမှန်ကန်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့အား ဟောကြားခဲ့၏။ အသံတိုးကာ မြှင့်တင်ကြွေးကြော်ခြင်းမရှိပဲ မည်ကဲ့သို့ ထောင်ချီသောသူတို့အား ကြားအောင် ဟောပြောနိုင်မည်နည်း ၊ ရှင်ယောဟန် ၇း၃၇ ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်သောအခါ
“ယေရှုသည် ရပ်၍ ကြွေးကြော်သည်ကား ရေငတ်သောသူရှိလျှင် ငါ့ထံသို့လာ၍ သောက်လော့” (ယော ၇း၃၇) ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
လူသည် ငိုလျက်ကြွေးကြော်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားခြင်းကို ဂရိဘာသာစကားအရ “စူးရှ သောအသံ၊ သို့မဟုတ် ချက်ချင်းတမဟုတ်ချင်းဟု (Gနသမါန Rငခုနမ နြမမပ) က အနက်ပြန်၏။ ငယ်သံပါအောင် စူးရှသောအသံ၊ စိတ်တုန်လှုပ်ချောက်ချား၍ ကျယ်လောင်စွာ အောင်ဟစ်သည် (လေသံမာ)ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ (၁၅၅၈-၁၆၀၂ – ပရိုတက်စ်တင့်န်ဂိုဏ်းဝင် ဝီလျံဖက်ခ်ကီ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ယုံကြည်ခံယူချက်နှင့်ဆိုင်သော ဒေသနာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အစွန်းမရောက်ဖို့ သတိပြုသင့်သည်။ သို့သော်လည်း ပို၍ တိုးတက်ရန် တိုက်တွန်းခြင်း၌ အလွန်အမင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်တွန်းသင့်ပါသည်။ (Wlliam perkins, The Art of Prophesying , The Banner of Truth Trust, 2002 reprint P.75) ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက် ပြောကြားသည်မှာ၊
အသင်းတော်များတို့၏ ကြီးမားသောပြဿနာသည် ဓမ္မအမှုတော်ဆောင် ပြဿနာ ဖြစ်၏။ အကြောင်းမှာ ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်၌ လောင်သောမီးကဲ့သို့ အမှုဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ချစ်သနားအားကြီး မရှိခြင်း၊ နှစ်ခြင်းဆရာ ယောဟန်ကဲ့သို့ ရဲရင့်သောသတ္တိမရှိခြင်း၊ ချက်ချင်းတမဟုတ် ဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်အဖို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ရယူ၍ အမှုဆောင်ခြင်း မရှိသောကြောင့်ပေတည်း။ ဘုရားသခင်အား ကျေနပ်စေသော လုပ်ဆောင်မှုဆိုရာတွင် သခင့်အမှုတော်အဖို့ ထိထိမိမိ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကောင်းကင် ဘုံက ခွန်အားလိုအပ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိကြရမည်။ ငါ့အရိုးတို့၌ ချုပ်ထား၍ လောင်သောမီးကဲ့သို့ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ငါ့နှလုံး၌ဖြစ်သောကြောင့်ဟူ၍ ယေရမိခံ စားသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၌လည်း ရှိရပါမည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲ၌ မီးကဲ့သို့လောင်ကျွမ်းပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ငြိမ်ငြိမ် နေမည် မဟုတ်တော့ပေ။ (John R-Rice D.D. The Soul Winner's Fire, Sword of the Lord Publishers, 1969, PP. 53-54).
အာမင် ဍ အာမင်
ဒေါက်တာမာတင်လွိုင်-ဂျုံးသည် မကြာခဏပင် သူဟောကြားခဲ့သမျှသော တရား ဒေသနာကို မှတ်မိသတိရနေသည်။ အကြောင်းမှာ များသောအားဖြင့် တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုအစည်း အဝေး မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်၌သာ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့အဖို့ လမ်းညွှန်ဟောကြားလေ့ ရှိသော ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်ကို အနည်းအကျဉ်းသာ ထုတ်ဝေလျှက်ရှိသည်။ သို့ပါသော်လည်း တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော တိတ်ခွေကို နားထောင်ကြည့်ပါက သင်တို့အဖို့ အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ အဝေးကလာရောက်သောသူအများတို့သည် ထိုဆရာကြီး၏ မနက်ပိုင်း တရားဒေသနာထက် ညနေပိုင်းတရားဒေသနာကို ပို၍ နားထောင် ကြပါသည်။ နာမည်ထုတ်မဖေါ်လိုသော တရားဟောဆရာကြီးများ၏ အကြောင်းကို ဒေါက်တာလွိင်-ဂျုံး ပြေားကြားသည်မှာ။ “ဟောကြားခြင်း၌ ဇွဲလုံ့လဝိရိယမပါရှိခြင်း၊ စိတ်ဝင်စား မှုမရှိ၊ ဒေသနာတစ်ခုလုံးသည်လည်း အနှစ်သာရမရှိ သဘောတရားသက်သက်သာ”ဟု ပြောကြား ခဲ့သည် လွန်ခဲ့ပြီးသောအချိန်ကာလများ၌ တရားဟောကြားရာတွင် စိတ်အား ပြင်းထန်ခြင်းကို သိသာပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင် ဟောကြားခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အခါ အဘယ် ကဲ့သို့နည်း၊ အဘယ်ကြောင့် ခေတ်သစ်တရားဟောဆရာများသည် လွန်ခဲ့ပြီးသော အမှု တော်ဆောင်တို့၏ ပုံစံကို မထိန်းသိမ်းကြသနည်း၊ ဘာအတွက်ကြောင့် တရားဟောကြသလဲ၊ ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေရာတွင် မီးကဲ့သို့တောက်လောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တရားဟောခြင်း ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အကြောင်းကို လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကြားနာသူတို့စိတ်ထဲ၌ တောက် လောင်သောမီးဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေစေရန်ဖြစ်သည်။ (D. Martyn Lloyd – Jones, M.D ., Preaching and Preacher, Zondervan Publishing House , 1981, PP 88, 90, 97).
အခုဆိုရင် ကျွန်ုပ်အသက် ၇၀ ပြည့်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် နေ့တိုင်း နာရီဝက်လောက် ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ဖြစ်၏။ နာရီဝက်လောက် ရေကူးဖြစ်၏။ နီမြန်းသော အသားငါးကို ကျန်းမာရေးကြောင့် တရားမဟောနိုင်မည်စိုး၍ မစားရက်တော့ပါ။ ကျန်းကျန်း မာမာဖြင့် တရားဟောနိုင်ရန် အချိန်ကြာကြာ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း အမြဲပြုလေ့ရှိပါသည်။ ရေးသားထားသော ဤတရားဒေသနာကို အင်တာနက် ထဲ၌ သင်ဖတ်ကြားခြင်းအားဖြင့် သင်နားလည်မည်မဟုတ်။ စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ဟောကြားပါမှ သင်သဘောပေါက်နားလည်မည် ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးအားဖြင့် ဝါကျ တစ်ကြောင်းချင်းစီကို ဟောကြားထားပါသည်။ စာကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပြီး မစ္စတာ ဆောင်းက မန်ဒရင်-ရိင်းနာလို ဘာသာပြန်ဆိုပြီး မစ္စတာမန်စီယာက စပိန်လို ဘာသာပြန်ထား ပါသည်။ ဤဒေသနာတော်ကို နောက်ဆုံး (၁၅)မိနစ်တွင် ဘာသာစကားနှစ်မျိုးအားဖြင့် ပြန်ဆိုထားပါသည်။ ဝီလျံဖက်ကီ အကြံပေးထားသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်၌ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းအဖို့ စိတ်အားထက်သန်ဟောကြားခြင်း မရှိပါက နားထောင်သော သူတို့အဖို့ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပေမည်။
မနေ့ည ကျွန်ုပ်ဇနီး၊ သားနှင့် အသင်းသားလူငယ်တစ်ယောက်တို့သည် ၁၉၈၅၊ ဇွန်လ ၉ရက်နေ့က ဒေါက်တာ ဒဗလျူခရစ္စဝေလ်ဒါးလားစ်၊ တက္က်ဆက်ပြည်နယ် ပထမနှစ်ခြင်းအသင်း တော်၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်ကို ဗီဒီယို၌ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ကြ၏။ ဒေါက်တာ ချားလ်စတန် လေသည် တောင်ဘက်နှစ်ခြင်း ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌနေရာ ရရှိနေခြင်းကို အနောက်တော် ဘက်နှစ်ခြင်းသီဩလော်ဂျီ ကျမ်းစာကျောင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာဖက်စ်ပက်တာဆန်မှ ကျေငြာအပြီးတွင် သံစုံသီချင်းအားဖြင့် သီဆိုချီးမြှင့်ပေးပြီး ဆုတောင်းကောင်းကြီး ပေးခဲ့ကြ၏။
ဤသည် (ဃ့မေငျာasအငခ) စိတ်လွတ်ကိုယ်လွှတ်ကိုးကွယ်ခြင်း(သို့မဟုတ်) ရုတ်တရက် ကြီး တိုးပွါးလာသော ဝတ်ပြုအစီအစဉ်မဟုတ်၊ မူရင်း နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တို့၏ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အရေးပါသော အချို့အချက်အလက် တွေကို ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော် တော်တော်များများ ချန်လှပ်ခဲ့ကြသည်။ အံ့မခန်းပါပဲဍ ဘယ်တော့မှအမှားမရှိသော ဘုရားနှုတ်ထွက်စကား” ဟူသော ဒေသနာခေါင်းစဉ်ကို ဒေါက်တာ ခရစ္စဝေလ်ဟောကြားစဉ် လက်ခုပ်ဩဘာလေး ခေါက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ဒေသနာဟောကြားစဉ်၌ သုံးကြိမ်လက်ခုပ်ဩဘာပေးခဲ့ကြပြီး ဒေါက်တာခရစ္စဝေလ် တရားဒေသနာ ခေတ္တရပ်တန့် လောက်အောင် အာမင်ဍ ဟု အားရပါးရချီးမွမ်းဩဘာ ပေးခဲ့ကြ၏။ တရားဒေသနာသည်လည်း နားထောင်သောသူတို့အား ပြင်းထန်စွာတုန်လှုပ်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့၏။ ၎င်း တရားဟောခြင်းကို တီဗွီ၌ ကျွန်ုပ်ကြည့်ဖြစ်သည်။ တကယ်ပဲ ကျွန်ုပ်တို့ မရှက်မကြောက်ပဲ သမ္မာတရားကို ဝေငှကြဖို့ လိုပါသည်။ ဘုရားသခင်အဖို့ ဘယ်တော့မှ မရှက်မကြောက်ပဲ သက်သေခံဝေငှကြပါစို့ဍ ကျွန်ုပ်၏ တရားဒေသနာ ဟောစဉ်၌လည်း ထိုကဲ့သို့ လက်ခုပ်ဩဘာ ပေးခဲ့ကြသည်။ ဘာကြောင့် လက်ခုပ်ဩဘာ မပေးရမလဲ၊ ဒေါက်တာခရစ္စဝေလ်၏ ဒေသနာကို လက်ခုပ်ဩဘာ ပေးကြသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်၏ ဒေသနာကိုလည်း လက်ခုပ်ဩဘာပေးကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှပင် စိတ်အားထက်သန်စွာဟောကြားနေပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေသနာ နိဂုံး၌ ပျေက်ဆုံးဝိညာဉ်များအဖို့ ထိရောက်မှုမရှိလျှင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ပတ်သက်မှု မရှိလျှင် အကျိုးရှိမည်မဟုတ်ပေ။
“ကိုယ်တော်၏ အိမ်တော်၌ စွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည် ကျွန်ုပ်ကိုစားပါ၏ (ရှင်ယောဟန် ၂း၁၇)”
ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အရေးကြီးသောအချက် နောက်တစ်ချက်သို့ ပို့ဆောင် ပေး၏။
၂။ ဒုတိယ၊ စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ဆုတောင်းပဌနာပြုရပါမည်။
ကနဦးခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူများ စိတ်အားထက်သန်စွာ မည်ကဲ့သို့ဆုတောင်းကြသည်ကို တမန်တော် ၄း၂၄ကို ဖတ်ကြည့်ပါက သိရှိနိုင်ပါသည်။
“ထိုသူတို့သည် ကြားရလျှင်၊ တညီတညွှတ်တည်း ဘုရားသခင်ထံသို့ အသံကိုလွှင့်လျှက်” (တမန် ၄း၂၄)
“အသံကိုလွှင့်လျက်” ဟူသောစကားလုံးကို မှတ်ထားကြပါ။ ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် သူတို့သည် အသံကိုတိုးချဲ့ပြီး ကျယ်လောင်စွာ ဆုတောင်းကြသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက် ကြပါသည်။ “ထိုသူတို့သည်ကြားရလျှင် တညီတညွှတ်တည်း အသံလွင့်ကြသည်” ဟူသော စာပိုဒ်ကို ထပ်၍ မှတ်သားစေလိုပါသည်။ များစွာသော (ဃသာနညအအေသမ ) အနက်အဓိပ္ပါယ် ရှင်းလင်းသူတို့သည် ထိုကျမ်းပိုဒ်အနက်ကို မသိခဲ့ကြပါ။ ချားလ်ဂျွန်အီလီကုတ်က ထိုကျမ်းအနက် အဓိပ္ပါယ်ကို ခန့်မှန်းဟောကြားခဲ့သေး၏။ ကျွန်ုပ်အနေနှင့် “အသံကိုလွှင့်လျှက်” ဟူသောစာပိုဒ်ကို အသံကျယ်ကျယ်ဆိုသည်ထက် ပို၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိမည် ထင်ပါသည်။ တမန်တော်တို့၏ ဆုတောင်းသံကိုလည်း မှတ်သားကြည့်ပါ “ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ရဲရင့်စွာ ဟောပါမည့်အကြောင်း ကယ်မသန်းတော်မူပါဟု ဆုတောင်းကြ၏။” (တမန် ၄း၃၀)။ ထိုအရာများက ထိုသူတို့၏ ဆုတောင်းခံချက်များ ဖြစ်ကြ ပါသည်။ သဘောတရားအားဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဆုတောင်းခံချက်ကို အားလုံးက သဘောတူပြီး ဆုတောင်းကြသည်ကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုအရာများသည် အပိုဒ်ငယ် ၂၄ ထဲက “တညီတညွတ်တည်း”ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဖေါ်ဆောင်ပါသည်။ ၁၉၁၀ ခုနှစ် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ နိုးထမှုဖြစ်သကဲ့သို့ “ထိုစဉ်၌ နိုးထမှုရှိခဲ့သည်ကို ဖေါ်ပြသည်။ တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ကျွန်ုပ် ထိုကဲ့သို့ နိုးထမှုဖြစ်အောင် သက်သေခံဝေငှခဲ့သည်။ ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များ အသစ်တဖန်မွေးဖွားလာသည့်တိုင်အောင် သက်သေခံဝေငှနိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်အား ထက်သန်စွာ ဆုတောင်းဖို့လိုပါသည်။ ယေရှုဘုရား ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ဆုတောင်းသကဲ့သို့ ဆုတောင်းကြရပါမည်။
“ပြင်းစွာသော ဝေဒနာကိုခံလျှက် အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏” (လုကာ ၂၂း၄၄)
“ကိုယ်တော်၏အိမ်တော်၌စွဲလမ်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည် ကျွန်ုပ်ကိုစားပါ၏” (ယောဟန် ၂း၁၇)
၃။ တတိယ၊ ရွှင်လန်းစွာ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသီချင်း ဆိုသင့်ပေသည်။
“ငါတို့အစွမ်း သတ္တိတည်းဟူသော ဘုရားသခင်အား ရွှင်လန်းစွာ သီချင်းဆိုကြလော့။ ယာကုပ်အမျိုး၏ ဘုရားသခင်အား ကျူးဧသောအသံကို ပြုကြလော့”။ ဆာလံ ၈၁း၁ အကယ်၍ ရွှင်ရွှင်မြူးမြူး သီချင်းသီဆိုကျူးဧခြင်းမဟုတ်ပါက ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တို့၏ နှလုံးသားအား ထိခိုက်နိုင်မည်မဟုတ်။ အကယ်၍ သဘောတရားလောက်သာ အပြုံးမဲ့လျှက် သီချင်းသီဆိုပါက ဘုရားသခင် ကျေနပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အသံကျယ်လောင်စွာ ရွှင်လန်းမြူး တူးခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါ၏။ “ငါတို့အစွမ်းသတ္တိတည်းဟူသော ဘုရား သခင်အား ရွှင်လန်းစွာ သီချင်းဆိုကြလော့။ ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အား ကျူးဧသော အသံကိုပြုကြလော့ (ဆာ ၈၁း၁)၌ ရေးသားထားသည်။ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် ပြောကြားသည်မှာ “ဝမ်းနည်းကြေကွဲလေသံဖြင့် ဂီတမပါပဲ သီဆိုကျူးဧခြင်းက ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝေစေပြီး နှလုံးသားကို တို့ထိစေပါသည်။ ဝိညာဉ်အသစ်များ ဖမ်းဆီးရာ၌ များစွာ အကူအညီဖြစ်စေပါသည်။ (John R.Rice D D. Why our Churches Do not Win Souls, Sword of the lord Publishers 1966. P 126) .
ဘုရားရှင်အား ချီးမွမ်းကိုးကွယ်သည့်အခါတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ရင်ထဲအသည်းထဲက သီဆိုလျှက် ဘုရားရှင်ကို ချီးမွမ်းကြပါစို့။ “ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အား ကျူးဧသော အသံကို ပြုကြလော့” ဍဍဍ
၄။ စတုတ္ထ၊ အသင်းတော်၌ လာရောက်ကြသော ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်လူသစ်များအား ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာဖြင့် ဒါဝိတ်က ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်အား မိန့်ကြားခဲ့ သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့နိုင်ပါသည်။
“လက်ျmဘက်သို့ အကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသောအခါ၊ အကျွန်ုပ်သိကျွမ်းသော သူမရှိပါ။ ပြေးလွတ်ရာလမ်းလည်း ပိတ်ပါ၏။အကျွန်ုပ်အသက်ကို နှမြောသောသူမရှိပါ။ (ဆာလံ ၁၄၂း၄)။
မိမိကိုကိုသာ ဂရုစိုက်ချစ်သော အသင်းသူ^သားများရှိသောအသင်းတော်သို့ ပျောက်ဆုံး ဝိညာဉ်လူသစ်များ ရောက်ရှိလာနိုင်ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် မိမိနေရာ၌သာ ဇိမ်ကျကျထိုင်လေ့ ရှိသည်။ လူသစ်များကို ဂရုမစိုက်ပါ။ ထိုသူတို့သည် လူသစ်များအား နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပြီး မိတ်ဖွဲ့ရန် အလိုမရှိကြပါ။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကောင်း နှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။ စကား နည်းနည်း ပါးပါး ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မည်။ အပေါ်ယံမျှသာဖြစ်ပြီး တကယ်ဂရုမစိုက်ကြပါ။ “ငါ့ဝိညာဉ်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူမရှိ’ အိုဍ ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အသင်းတော်၌ လာရောက်ကြသော လူသစ်များအား စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် တွဲခေါ်ဂရုစိုက်ကြပါစို့ ဍ မိမိကို မိမိမေ့ထားပြီး ထိုသူတို့အား ပြုစုပေးကြပါစို့။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မိမိနေအိမ်၌ ရှိနေသကဲ့သို့ လာရောက်သောသူများအား နွေးထွေးစေကြပါစို့ဍ အပြစ်သားများအား အစဉ်တစိုက် ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်သော ယေရှုဘုရားနည်းတူ သူတပါးအား ဂရိုက်ကြပါစို့ ဍ”လူသားသည် ပျောက် သောသူတို့ကို ရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငှာ ကြွလာသတည်း” (ရှင်လုကာ ၁၉း၁၀)။ ကျွန်ုပ်တို့ အား ယေရှုသည် ကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့သကဲ့သို့ ထိုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ်တော်၏ အိမ်တော်၌ စွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည် ကျွန်ုပ်ကို စားပါ၏ (ရှင်ယောဟန် ၂း၁၇)။
ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် ဓမ္မသီချင်း စာအုပ်နံပါတ် (၆)ကို အတူတကွ သီဆိုကြပါစို့။
ပျက်စီးသူကယ်တင်သူ၊ သေလုသူ ကြည့်ရှု
(၁၈၂၀ – ၁၉၁၅ ဖန်နီဂျေ . ခရော့ဘီ သီကုံးသော ပျက်စီးသူကို ကယ်တင်ခြင်း”)
ဒေါက်တာ အာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျေအာရ် ဟောကြားသော
“ကိုယ်တော်၏ အိမ်တော်၌ စွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည် ကျွန်ုပ်ကိုစားပါ၏ (ရှင်ယောဟန် ၂း၁၇)။
(ယောဟန် ၂း၁၆ ၊ ဆာလံ ၆၉း၉၊ ၁ပေ ၂း၂၁၊ ၁တိ ၃း၁၅ ၊ တိတု ၂း၁၄)။
၁။	ပထမ၊ သတင်းကောင်းဖို့အလို့ငှါ ဇွဲလုံ့လဝိရိယရှိလျှက် ဟောပြေသင့်သည်၊ (ယောဟန် ၃း၇၃)။
၂။	ဒုတိယ ၊ စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ဆုတောင်းပဌနာပြုရပါမည်။
(တမန် ၂း၂၄ ç ၂၉၊ လုကာ ၂၂း၄၄)။
၃။	တတိယ ၊ ရွှန်လန်းစွာဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသီချင်းသီဆိုသင့်ပါသည်။ (ဆာလံ ၈၁း၁)။
၄။	စတုတ္ထ၊ အသင်းတော်၌ လာရောက်ပါဝင်ကြသော ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်လူသစ်များအား ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ (ဆာလံ ၁၄၂း ၄၊ လုကာ ၁၉း၁၀)။